Iibhola zenyama zeMvana zaseTurkey | Ukupheka kweKhitshi
Iibhola zenyama yemvana yaseTurkey
UHana mitchell | | idelicatessen, ngokubanzi, Ukupheka kwenyama
Uninzi lwenu, ulwazi olujikeleze I-gastronomy yaseTurkey baqala kwaye baphele ngexesha elinye-bohlwaywa ngamabali amaninzi asezidolophini kunye neeklichiki, yonke into kufuneka ithethwe -: kebab. Yazi ke leyo, ukongeza kuloo nto ukomeleza I-ace up sleeve yethu emiselwe ukugcwalisa isityalo sethu xa kungekho nto efrijini okanye uhlahlo-lwabiwo mali lokutya ngaphandle kwe-oscillates phakathi kwe- € 3 kunye ne- € 5, kukho indawo enkulu kwaye emnandi yokupheka egcwele iziqholo eziqholiweyo kwaye inongwe ngeesosi ezinencasa njengaleyo yeyogathi. Namhlanje sikunika into enokuba lilitye lokuqala lokuba yintoni iitapas zaseTurkey: iibhokhwe zokudla zenyama yegusha (aká Kofte yemvana).
Kwabo abathandi Ungazazi izibonelelo zokutya kwaseTurkey, ndiza kukuxelela ukuba ibonakaliswa kukusetyenziswa kweziqholo, imifuno, inyama eyosiweyo (uyayenza le nto, eh…) kunye neoyile eninzi yomnquma. Yazi nokuba iTurkey kukutya okunokulinganisela kwaye okumnandi okudibanisa izinto zokupheka zoMbindi Mpuma kunye nezinto zokutya kweMeditera.
Ke ukuba unesibindi sokubeka bucala ukhuseleko lwakho phakathi kwezitovu, yonwabela inyathelo ngenyathelo lezi zinto zimnandi iibhokhwe zokudla zenyama yegusha. Shiya uluvo undixelele ukuba ayenjani amava akho!
Namhlanje sikubonisa ukuba kwimicimbi yokutya kwaseTurkey kukho ubomi ngaphaya kweKebab. Namhlanje sikufundisa ukuba ungalungisa njani amadombolo enkomo enkomo yaseTurkey (iMvana Kofte yeengcali). Qaphela kuba iresiphi ebhakwe!
1 ikhilogremu yenyama yegusha ecoliweyo
1 itswele ebomvu, ecoliweyo
1 icephe yeparsley enqunqiweyo
Sitshisa i-oven ukuya kuma-200º
Xuba inyama ecoliweyo, kunye netswele, igalikhi, amaqanda, ipaprika, ikumin kunye neparsley. Ixesha lokunambitha.
Nje ukuba yonke into idityaniswe kakuhle, sithatha iinxalenye ezinobungakanani be-walnut kwaye senza iibhola esiza kuzibeka kwiphepha lokubhaka kwitreyi ye-oveni.
Sibeka iibhola zenyama ehovini sizishiye malunga nemizuzu eli-15. okanye de sibone ukuba ziyi-tad yegolide.
Sisusa itreyi kwi-oveni kwaye songeza ikalika, ubusi kunye nokunxitywa kweoyile
Siphindela ehovini kangangemizuzu engama-20.
Sikhupha kwaye sikhonze nge-yogurt sauce.
Sizibeka emthonjeni esiya kuthi emva koko sihambise eziko, sigubungele isosi eya kuthi ibe ilungile, kwaye sibuyisela yonke into eziko kwi-175º malunga ne-40 min.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » idelicatessen » Iibhola zenyama yemvana yaseTurkey